अस्पतालबाट अमिताभ बच्चनले गरे प्रार्थना : मलाई साथ दिनूस् भगवान ! – Jagaran Nepal
अस्पतालबाट अमिताभ बच्चनले गरे प्रार्थना : मलाई साथ दिनूस् भगवान !
मुम्बइ । बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनसहित उनको परिवारका चार जनालाई कोरोनाभाइरस पुष्टि भएपछि उनीहरुको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
र यो कहिल्यै गुमाउन चाहन्न म । मलाई साथ दिनूस् भगवान ’ अमिताभको यस्तो प्रार्थनामाथि उनका करोडौं शुभचिन्तकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । साथै अधिकांशले बच्चन परिवारको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दैआएका छन् ।
केही दिन अघि भारतीय सञ्चार माध्यमले अमिताभले कोरोना जितेको र केही दिनमा अस्पतालवाट घर फर्कने भनेर समाचार वाहिरिएको थियो । सो समाचार गलत भन्दै अमिताभले सामाजिक सञ्जाल माफृत जानकारी दिएका थिए । उनले आफु कोरोना मुक्त नभएको र अस्पतालको अनुमति विना घर नफर्कने बताएका थिए । अमिताभ र उनको परिवारको स्वास्थ्यलाभकोक कामना सहित भारतका विभिन्न स्थानमा पुजा समेत भएको छ ।